Cinema HD V2 Ngwa - Lelee ihe nkiri, usoro na ihe nkiri TV n'efu
Maka gam akporo
Cinema HD Maka FireStick
Cinema HD Maka igbe Android TV
Cinema HD Maka Google TV 4k
Cinema HD Maka Smart TV
Cinema HD Maka Roku
Cinema HD Maka Windows
Cinema HD Maka Mac
Cinema HD Maka Linux
Ndozi Cinema HD Njehie
Cinema HD - Ezigbo Debrid anaghị arụ ọrụ [Edozi]
The Cinema HD APK enweghị data dị, enweghị njikọ, enweghị njikọ, ma ọ bụ mperi nkesa (FIX)
Edemede ndepụta okwu Crashing, Buffering/anaghị wụnye, yana Cinema APK Crashing niile edozila.
Cinema HD APK Enweghị data, enweghị nke enyere, enweghị njikọ ma ọ bụ mperi nkesa (FIX)
Nlebanya ihe nkiri na Cinema HD
N'oge a, ndị mmadụ na-ekiri ihe omume mgbasa ozi na telivishọn mgbe niile ma ọ bụ na-eji ịntanetị na-ekiri ihe nkiri kachasị amasị ha na ihe ngosi n'ịntanetị na ngwa akwụ ụgwọ. Ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ngwa na-enye ihe ngosi na ihe nkiri kachasị amasị gị dịka Netflix, Hulu, HBO, ngwa mgbasa ozi ndị ọzọ, na nke ahụ bụ ngwa niile akwụ ụgwọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ngwa mgbasa ozi efu kpamkpam nwere ọdịnaya dị elu yana nnukwu ọba akwụkwọ nke ihe nkiri na ihe nkiri TV, budata. Cinema HD APK site na webụsaịtị anyị CinemaHDv2.Net ịnụ ụtọ ugbu a.
Ị ga-ahụ ngwa ngwa ọdịnaya ị hụrụ n'anya ma nwee ọ enjoyụ na ngwaọrụ gam akporo gị maka atụmatụ mara mma nke ngwa a na-enye. Gaa n'ihu na-agụ akụkọ a ka inyocha atụmatụ ndị a.
Na-ewebata Cinema HD ngwa
Pụtara ìhè atụmatụ nke Cinema HD
Mfe ọrụ onye ọrụ
Ọtụtụ ihe nkiri na ihe nkiri TV
Ahụmahụ sinima dị obere
Nwee ụtọ ọdịnaya site na obere aghụghọ
Tinye ihe ngosi ọkacha mmasị gị na ndepụta gị
Njirimara Ndepụta atụnyere
Mgbanwe na ụda dị elu
Nwee anụrị ihe nkiri na ihe nkiri TV na-anọghị n'ịntanetị
Chekwa ma weghachi
Kedu ihe pụrụ iche na Cinema HD Apk faịlụ
Ọnụọgụ ihe nkiri na ihe ngosi na-akparaghị ókè n'efu
Enweghị ndebanye aha achọrọ
Olee otú ibudata Cinema HD Apk na gam akporo?
Usoro izugbe iji budata ya Cinema HD App
Ntuziaka zuru ezu ka ịwụnye Cinema HD ngwa
Olee otú ibudata Cinema HD Ngwa dị na FireStick 4K, TV Fire?
Nzọụkwụ iji wụnye Cinema HD Apk maka PC?
Download na wụnye Cinema HD APK na Windows 11/10/8.1/7 PC ma ọ bụ kọmputa Mac [Nkụzi]
Na Linux Mint, Ubuntu, na Fedora, wụnye ya Cinema HD MOD ngwa ngwa.
Nzọụkwụ iji wụnye Shlashlik Android emulator na Linux
Otu esi enweta GenyMotion Android emulator na Linux
wụnye Cinema HD ngwa na kọmputa Linux na-eji Shashlik/GenyMotion Android Emulator
Iji Genymotion Android emulator
Esi nweta Cinema HD ịrụ ọrụ na igbe Android TV & Smart Tv?
atụmatụ Cinema HD na Smart TV
wụnye Cinema HD V2 na Smart TV [LG, VU, OnePlus, Samsung, MI, Phillips]
Otu esi eji Trakt TV na Cinema HD v2 na Smart TV
Budata site na ntaneetị Cinema HD V2 APK maka igbe Android TV
wụnye Cinema HD V2 APK dị na Roku Stick
Kwụpụ 1: Na ngwaọrụ gam akporo gị, budata ma wụnye ngwa Cast Mpaghara.
Kwụpụ 2: Budata ma wụnye ngwa nnata nkedo mpaghara na ngwaọrụ Roku gị.
Nzọụkwụ 3: Jikọọ gị Android ma ọ bụ Apple Device na Roku Stick
wụnye Cinema HD v2 maka Google TV 4K na Chromecast
Esi melite Cinema HD Apk nwere ụdị kachasị ọhụrụ?
Olee otú iji Cinema HD Ngwa?
Cinema HD bụ nnukwu ngwa maka ngwaọrụ gam akporo gị nke na-enye gị ndepụta ihe nkiri ama ama, yana ihe ngosi TV dị elu. Ngwa a na-enye gị igwe nchọta ka ị chọta ngwa ngwa ihe nkiri na ihe nkiri TV na-amasị gị wee họrọ ịnụ ụtọ ya.
Cinema HD Etadị Beta
Ngwa a ga-egosipụta njikọ ndị dị n'efu na webụsaịtị, ha ga-egosikwa na ngwaọrụ gị. Site na njirimara na-adọrọ adọrọ nke ngwa a, ị gaghị agwụcha nhọrọ mgbasa ozi maka ihe ngosi na ihe nkiri ọkacha mmasị gị. Gịnị na-eme Cinema HD ngwa nwere?
A gam akporo TV Igbe
a Cinema HD ngwa nwere interface dị mfe nke na-enyere gị aka ịghọta ngwa ngwa ka esi eji ya na bọtịnụ ọrụ na ihuenyo ngwa. Ị nwere ike ịchọgharị ngwa ngwa site na aha ndị ahụ Cinema HD na-ahazi na ngwa a.
Ọ na-enye gị ohere ileba anya na ihe nkiri nkiri na ihe ngosi tupu ị kpebie ma ị ga-ahọrọ ọdịnaya ị ga-anụ ụtọ ma ọ bụ na ị gaghị ahọrọ. Ihe dị mma ma dị mfe nke ngwa Cinema a ga-enyere gị aka inwe ọmarịcha ahụmahụ ikiri ihe nkiri.
Ngwa Cinema a na-enye gị ọmarịcha ihe nkiri na ihe ngosi n'ụdị 60. Ị nwere ike ịchọta ihe nkiri dị iche iche site na egwu, ihunanya, anime na ihe ndị ọzọ n'ụdị ngwa a. E wezụga a nnukwu ọbá akwụkwọ nke fim, ị ga-adị mfe ịhụ TV egosi na-enwe ha kpamkpam free na Cinema HD.
Cinema HD na-enye gị ahụmịhe ikiri ihe nkiri dị ka ikiri na sinima pere mpe. Ọ bụrụ na ị na-atụ egwu ịga sinima ikiri ihe nkiri, ngwa a ga-abụ nhọrọ dabara adaba maka gị.
Cinema HD v2 - Ahụmahụ sinima dị obere
Naanị ị ga-emepe ekwentị gam akporo gị wee nweta ngwa Cinema a iji nwee ọ enjoyụ ọdịnaya ọkacha mmasị gị n'ụlọ gị ma ọ bụ ebe ọ bụla ịchọrọ. Ngwa a ga-enyere ndị na-anụ ọkụ n'obi na ihe nkiri aka ka ị chekwaa oge buru ibu ma nwee ọ enjoyụ ọdịnaya ọkacha mmasị gị n'ụzọ dị mfe.
a Cinema HD ngwa ga-enye gị atụmatụ bara uru nke ị nwere ike ịkpọ vidiyo na ndepụta okwu na ndabara. Ọ bụrụ na ị họrọghị ndepụta okwu, ị ga-eji aka họrọ faịlụ ahụ ka ọ nụ ụtọ ọdịnaya. Ngwa ahụ ga-enye ndepụta okwu n'ụzọ ziri ezi iji nye gị ahụmịhe ikiri ihe nkiri kachasị mma.
Nwee obi ụtọ n'ọdịnaya site na obere nkọwa - Cinema HD v2
In Cinema HD, ị ga-enwe nnukwu nhọrọ na Tụgharịa TV Mwekota nke na-enyere gị aka ịmepụta listi ọkpụkpọ ka ị mee ngwa ngwa egwu ihe ngosi ọkacha mmasị gị. Njirimara a ga-emepụta ndepụta ihe ngosi ndị ị lere n'oge na-adịbeghị anya, ọ ga-agwakwa gị oge ọ bụla enwere ihe ngosi ọhụrụ nke ihe nkiri ma ọ bụ ihe nkiri ị lere.
N'ihi ya, ị nwere ike imelite ọdịnaya ọhụrụ ngwa ngwa na ngwa ngwa ma nwee ọtụtụ atụmatụ mara mma nke ngwa ahụ ga-enye.
na Cinema HD, ị ga-enwe nhọrọ iji gbanye autoplay ka ngwa ngwa na-ekpori ndụ ihe nkiri na ihe ngosi nke nhọrọ gị. Mgbe ịhọrọ ihe, ọ ga-egosipụta ụfọdụ njikọ, na ị ga-mkpa họrọ otu n'ime ndị njikọ na họrọ "Play" nhọrọ na-amalite ikiri. Ma na autoplay, ị gaghị ahọrọ njikọ, na Cinema HD ngwa ga-amalite ịkpọ gị vidiyo.
Cinema HD nwere ihe ọzọ bara uru nke bụ Ndepụta akwadoro, isi ihe siri ike nke ngwa ihe nkiri a nke ọtụtụ ndị ọrụ hụrụ n'anya. A na-enyocha ma na-emelite ọtụtụ ihe ngosi na ihe nkiri ọhụrụ na menu ngwa ngwa kwa ụbọchị.
Cinema HD V2 – Atụmatụ ndepụta atụ aro
Na mgbakwunye, ngwa ahụ na-enyekwa gị ndepụta ọzọ dabere naanị na ngwa AI nke nzacha ngwa iji nzacha ma na-akwado ihe nkiri na ihe ngosi nke otu ụdị ihe ị na-ekiri ma ọ bụ na-achọ.
Ihe nkiri na-egosi na Cinema HD na-akwado maka gị niile ga-eji ozi zuru ezu dị ka aha, ọkwa, mmalite, ụbọchị ewepụtara, ụgbọala na-adọkpụ na ndị isi ihe nkiri. Site na ozi zuru ezu nke na-enyere gị aka ịghọta ozi gbasara ihe nkiri, mmemme ahụ na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịhọrọ ọdịnaya ziri ezi maka gị ma nwee mmasị na ya.
Iji nye gị ahụmịhe kachasị mma, ewezuga ịnye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe ngosi na iyi ihe nkiri, Cinema HD na-enyekwara gị aka ịnụ ụtọ ọdịnaya dị elu na-abanyeghị n'ime ezigbo mbibi.
Ị ga-enwe oge ezumike zuru oke na ihe nkiri na ihe nkiri kachasị amasị gị zuru oke-mma mkpebi na ngwa a. Na mgbakwunye, ịnwere ike iji njirimara autoplay lelee HD or ultra HD ihe nkiri na Cinema HD.
Ị ga-enwe ahụmịhe ikiri ihe nkiri na-atọ ụtọ karịa site na njirimara nbudata na-anọghị n'ịntanetị Cinema HD na-enye gị. Na nke a bara uru atụmatụ, ị nwere ike mfe ibudata fim, TV ihe nkiri na-enwe ọ bụla nke ọkacha mmasị gị ọdịnaya mfe.
ihe nkiri na ihe nkiri TV - Cinema HD v2
Ị nwere ike ịnụ ụtọ ihe nkiri na ihe ngosi na mkpanaka Android gị n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla ịchọrọ na nke a Cinema HD ngwa ngwa. Budata ihe nkiri, ihe nkiri TV ma tinye onwe gị na mmemme TV, ihe nkiri na-enweghị njikọ ịntanetị ma ọ bụ ụgwọ data ekwentị na ngwaọrụ gị.
Cinema HD ga-azọpụta gị ọtụtụ oge mgbe ị na-eji ngwa ahụ site na ịkwado ihe niile masịrị gị, akụkọ ihe mere eme, ntọala na mmasị gị na faịlụ dị iche maka naanị gị. Ka ịchọta ebe faịlụ a dị, ị ga-aga Budata/cinema HD/ndabere.
Ị nwekwara ike mbupụ faịlụ ma bulite ya na ngwaọrụ ọhụrụ gị ọ bụla. Ọzọkwa, a ngwa na-enye gị akpaaka-ndabere atụmatụ, otú i nwere ike ime ya mgbe exiting ngwa na ndabere na weghachi ntọala. Site n'ebe ahụ, a ga-edozi nkwado ndabere na mpaghara mgbe imechi ngwa ahụ, ma ị nwere ike ịga n'ihu na-ekpori ndụ ọkacha mmasị gị oge ọzọ.
Budata site na ntaneetị Cinema Hd v2 apk
The Cinema HD ngwa ga-enyekwa gị ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ bụ isi dị ka ihe nzacha, ihe ọkpụkpọ vidiyo na-adịghị mma, na ikike ịchacha ọdịnaya adịghị mma. Ị ga-ahụ ndị a iche iche, bara uru atụmatụ na-enye gị ọmarịcha ikiri ahụmahụ nke ọkacha mmasị gị nkiri na ihe ngosi.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ị nweta ụdị nkwalite nwere ọtụtụ atụmatụ dị elu n'efu maka ahụmịhe dị egwu karịa, budata Cinema HD ngwa na weebụsaịtị anyị CinemaHDv2.Net. Na nke anyi Cinema HD Mod ngwa, ị ga-enweta ọtụtụ atụmatụ dị elu, gụnyere: Ọdịnaya niile bụ n'efu na enweghị oke.
Cinema HD ngwa bụ ụdị gbanwetụrụ Cinema HD Ihe ngosi TV dị na webụsaịtị anyị n'efu CinemaHDv2.Net. Site na faịlụ ngwa a, ị nwere ike nweta ọdịnaya niile nke ahụ Cinema HD ngwa na-enye n'efu.
Cinema hd - Lelee ihe nkiri HD n'efu
Ke adianade do, Cinema HD ngwa ga-enyekwa gị ọdịnaya na-akparaghị ókè, ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ihe nkiri na ihe nkiri kachasị amasị gị n'enweghị nchegbu maka ịpụ na ọdịnaya.
N'ihi atụmatụ ndị a dị elu nke ngwa ihe nkiri a, ị ga-echekwa ego buru ibu na ịkwesighi ịkwụ ụgwọ ndenye aha kwa ọnwa, naanị họrọ ọdịnaya kachasị amasị gị wee nwee ọ enjoyụ.
Ọ bụrụ na ị hụlarị nyiwe ikiri ihe nkiri dị ka Netflix, HBO, ma ọ bụ ụfọdụ ngwa mgbasa ozi ndị ọzọ, ọ ga-abụ na ike gwụ gị ịdebanye aha maka akaụntụ wee kwụọ ụgwọ iji nweta ihe nkiri, ihe ngosi na ụgwọ ọrụ ọkacha mmasị gị. kpọte ha.
Ugbu a, ị gaghị echegbu onwe gị maka nke a ọzọ, Cinema HD Ngwa ga-enye ngwá ọrụ iji họrọ na ịkwanye ihe nkiri n'efu, na ihe nkiri TV na-enweghị ịbanye maka akaụntụ yana n'efu.
Ịkwesighi ichegbu onwe gị maka ikpughe ozi nkeonwe gị ka ịdebanye aha akaụntụ dịka aha gị, adreesị, na email gị. Site na njirimara a, ị nwere ike nweta ma were ọdịnaya ọkacha mmasị gị nke Cinema na-enye na-enwe obi ụtọ na-enweghị ịbanye na akaụntụ gị.
In Cinema HD ngwa, ị gaghị echegbu onwe gị maka mgbasa ozi na-egosi na ọ ga-akwụsị ahụmahụ gị. Nke a mod version nke Cinema HD ga-ewepụ mgbasa ozi niile ka ị nwee ike ịkwanye ihe nkiri na ihe nkiri TV n'enweghị nsogbu na enweghị nkwụsị.
Cinema hd v2 ngwa download
Iji budata Cinema HD ngwa Ngwa maka ịnụ ụtọ ihe nkiri n'efu, ihe nkiri TV, ị nwere ike soro usoro ndị a dị mfe:
nzọụkwụ 1: Iji wụnye Cinema Apk, ị ga-mkpa ka gị android ngwaọrụ wụnye a ngwa si mpụga isi mmalite. Iji mee ka ntọala a nwee ike, ị ga-aga Settings na android gị, wee họrọ Nchekwa, wee mee ka isi mmalite ndị amabeghị.
nzọụkwụ 2: On gị gam akporo ngwaọrụ ihuenyo, ị ga-aga CinemaHDv2.Net wee chọọ Cinema HD ngwa n’ebe a na-achọ mmanya.
nzọụkwụ 3: Ị pịa"Budata site na ntaneetị Cinema HD v2 APK” bọtịnụ dị n'akụkụ ala nke isiokwu ahụ
nzọụkwụ 4: Chere maka Cinema HD ngwa usoro nbudata ngwa maka sekọnd ole na ole, mgbe ahụ ị nwere ike imeghe ngwa sinima a ka ọ nwee ọ enjoyụ.
⬇︎ Budata Cinema HD V2 APK
Mbụ, ị ga-aga ntọala na ngwaọrụ gam akporo gị, wee họrọ "Ngwa na amamọkwa":
Ọzọ, họrọ "Ikikere ngwa"
Mgbe ahụ, ị ​​​​ga-aga "Wụnye ngwa ngwa amaghi"
họrọ Ihe nchọgharị Chrome maka nhọrọ:
Gbanwuo: "Hapụ site na isi iyi a"
Na ihuenyo ụlọ, ị ga-aga chrome nchọgharị wee họrọ downloads
Mee usoro nke Wụnye Cinema Apk File
wụnye Cinema HD v2
Chere ka echichi ahụ mezue
Mgbe emechara echichi usoro nke Cinema HD V2, ugbu a ị nwere ike imeghe faịlụ ngwa ngwa ngwa ma nwee ọtụtụ ihe nkiri na ihe nkiri TV nke Cinema Apk na-enye na ekwentị gam akporo gị, na-enweghị gam akporo emulator.
Ka ibudata nke a Cinema HD ngwa on FireStick 4K, Fire TV Stick 4K, ma ọ bụrụ na ị tinyela faịlụ Apk ọ bụla na gị Osisi oku, ọ ga-adị mfe ịwụnye ngwa. Ma ọ bụghị ya, ị ga-mkpa ịgbaso usoro n'okpuru iji wụnye Cinema Apk na Firestick:
nzọụkwụ 1: Mbụ, ị ga-amalite ngwaọrụ gị na-eche maka home ihuenyo nke ngwaọrụ na-egosi elu. Na ihuenyo sistemu njikwa gị, ị ga-achọ ịme ka "Isi mmalite amaghi"(Wụnye ngwa ngwa amaghi) ịgbanwe.
nzọụkwụ 2: Ọzọ, họrọ: "Ọkụ Ọkụ m"Ma ọ bụ"ngwaọrụ m"
nzọụkwụ 3: Mgbe ahụ, ị ​​ga-pịa: "Nhọrọ ndị nrụpụta"
nzọụkwụ 4: Ihuenyo ga-egosi nhọrọ "Akụrụngwa amaghị” nke ị nwere ike ime ma ọ bụ gbanyụọ.
nzọụkwụ 5: Ọzọ, ị ga-achọ nhọrọ "Onye na-aputa ihe"N'elu ihuenyo ụlọ wee pịa"ekwe ka” iji ngwa a mepee ngwa nbudata.
Chọọ ihe nbudata
nzọụkwụ 6: na"Downloader ngwa” Ihuenyo na gị Fire TV Stick, ị ga-eme na ngalaba ihe nchọgharị ya wee tinye njikọ: https://cinemahdv2.net/download/ imeghe ngwa Cinema Apk wee budata ngwa faịlụ oghere a n'efu ka ọ nwee ọ enjoyụ na fim na mmemme. Ma ọ bụ budata faịlụ Apk ebe a:
⬇︎ Budata Cinema HD V2.4.0 APK
nzọụkwụ 7: Mgbe emechara nbudata na Cinema Apk na Firestick, Fire TV, ọ ga-edozi echichi na-akpaghị aka na ngwa ngwa. I kwesịghị: esila na ihuenyo bụ isi maka usoro nrụnye ga-ewere ọnọdụ nke ọma.
nzọụkwụ 8: Mgbe emechara ntinye Cinema Apk na Firestick, ị nwere ike imeghe Cinema HD Apk faịlụ ma nwee ọ enjoyụ na ihe nkiri na ihe nkiri kachasị amasị gị n'oge ọ bụla, ebe ọ bụla ịchọrọ.
Can nwere ike ngwa ngwa tinye Cinema HD apk on FireStick 4K, Fire TV Stick, Ọkụ TV Cube iji usoro dị mma ma dị mma maka ịnweta mgbasa ozi gị. Ị nwere ike ịnụ ụtọ nkwanye ọdịnaya mgbe ị na-eji ya Cinema HD apk na-enweghị ịga na saịtị gụgharia ma ọ bụ tinye ngwa.
Ị ga-achọ otu Android Emulator maka nke a. Nox App Player bụ nnukwu emulator Android ọhụrụ nwere ọtụtụ atụmatụ bara uru. Ị nwere ike nweta Nox App Player ntọala na-anọghị n'ịntanetị site n'okpuru.
⬇︎ Budata ihe ọkpụkpọ NoxApp Maka Windows
⬇︎ Budata ihe ọkpụkpọ NoxApp Maka Mac
chere maka echichi mechaa. Mgbe nrụnye na-anọghị n'ịntanetị kwụsịrị nbudata, pịa faịlụ nwere ike ime ugboro abụọ ka ịmalite usoro nwụnye maka Nox App Player.
Mgbe ị ga-eme ya malite Nox App Player, ọkachamara nwụnye na-egosi na ihuenyo na bọtịnụ ole na ole. Na mpio ikpeazụ, otu 'wụnye'bọtịnụ ga-ahụ. Biko kpatụ 'wụnye' bọtịnụ ka ịtọlite ​​​​ tinye Nox App Player na Windows PC/MA Kọmputa gị.
Mgbe ịmalitechara emulator, buru n'uche na ọ ga-ewe oge iji wụnye ya. Ihe ọkpụkpọ Nox App ga-edozi ngwa ngwa na PC gị.
Mgbe ahụ, ọ bụrụ na i nwebeghị, budata ngwa sinima APK site na njikọ dị n'okpuru.
⬇︎ Budata Cinema HD APK
Mgbe faịlụ APK kwụsịrị nbudata, pịa ha ugboro abụọ ka ịmalite Nox App Player. Họrọ Mepee Ya site na menu mmapụta na-egosi.
The emulator ga-akpaghị aka ibudata na wụnye APK faịlụ na gị Windows PC / Mac Kọmputa.
Usoro a ga-ewe naanị nkeji ole na ole iji mezue. Mgbe nke ahụ gasịrị, ndị Ihe nkiri sinima APK enwere ike ịhụ akara ngosi na Nox App Player ihuenyo ụlọ.
Iji malite mmemme ahụ, pịa akara ngosi ya.
Ị nwere ike tinye Android APPS na Linux na usoro ya, gụnyere Mint, Ubuntu, na Fedora, na-eji Shashlik Android emulator or GenyMotion gam akporo emulator.
Ị nwere ike ịlele ntuziaka onye nrụpụta maka Shashlik Android Emulator si ebe a. Anyị etinyela otu n'okpuru maka ịdị mma gị.
Iji iwu na-esonụ na ngwa ngwa, budata Repo Tool:
Na-esote, pịnye iwu a n'ime mpio iwu na ihuenyo na-esote nke pụtara:
Ugbu a, biko mepụta ndekọ ọhụrụ wee malite mmekọrịta n'ebe nchekwa. Maka ịdị mma gị, enyela iwu ndị a.
N'ikpeazụ, pịnye iwu na-esonụ ka mezue echichi.
isi mmalite / envsetup.sh
Ị nwere ike iji njikọ edepụtara n'elu ka budata GenyMotion gam akporo emulator na igwe Linux gị.
N'ikpeazụ, budata ma wụnye GenyMotion na PC Linux gị. Ị nwere ike nweta ozi ndị ọzọ gbasara usoro a site na njikọ ahụ n'elu.
Jiri Shashlik Android emulator mee ihe
Download na wụnye Android emulator si http://www.shashlik.com/ -> Na gị PC Linux, budata ma malite Shash.
Download Cinema HD APK kacha ọhụrụ faịlụ na ngwaọrụ gị. Anyị enyela njikọ ya n'okpuru, ka ọ dị gị mma.
Dọrọ na dobe ndị Cinema HD MOD ngwa faịlụ na interface Shashlik emulator.
Nzọụkwụ ọzọ ga-abụ ịgba ọsọ installer.
Mgbe echichi gasịrị, ịnwere ike ịmalite iji Cinema HD na sistemụ Linux gị.
Biko mepee ya GenyMotion gam akporo emulator.
Dọrọ na dobe ndị Cinema HD MOD APK enweghị mgbasa ozi faịlụ nke ibudatara na ibe gara aga banye na interface GenyMotion.
Nwụnye ga-amalite ugbu a.
Mgbe echichi mechara, ị nwere ike iji Cinema HD APK ka ịkwanye ihe nkiri na ihe nkiri TV ọkacha mmasị gị n'efu.
Ugbu a ị nwere ike ilele fim na usoro ọkacha mmasị gị na ngwaọrụ gam akporo gị. Na Cinema APK, ị nwere ike ịnụ ụtọ ihe nkiri, ihe nkiri TV na usoro ọkacha mmasị gị n'efu. Ị nwere ike ugbu a na-ekiri ka ị chọrọ ekele na nke a dị ịtụnanya software, nke na-abịa na magburu onwe ike na bụ kpam kpam free.
Cinema HD APK nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke TV ọwa na-enye gị na elu-definition, na n'ihi na ngwa a dị ebube nke na ọ ga-abụ na ị na glued gị gam akporo ngwaọrụ mgbe niile.
Ọ bụ ezie na ngwa ahụ adịbeghị na Google Play, enwere ike itinye ya na ngwaọrụ gị site na iji akụrụngwa ndị ọzọ. Ngwa ahụ bụ n'efu ma nwee ọtụtụ ihe ị ga-anụ ụtọ.
Ngwa ahụ gụnyere ọtụtụ njirimara na njirimara pụtara ìhè, ụfọdụ n'ime ha bụ ndị a.
Enweghị ụgwọ ezoro ezo metụtara ọrụ a.
Ọdịnaya dị elu nke ngwa a na-agbakwunye mmasị ya.
Usoro ihe omume dị oke nchebe na ntụkwasị obi.
Ọ nwere ọdịdị mara mma nke na-eme ka ọ dịkwuo mma.
Enwere akụ nke ụlọ ọrụ TV na ihe ndị ọzọ enwere ike ịnweta, nke dị egwu.
Usoro 1: Iji Pen Drive Method
1; Ị nwere ike iji software a na gị smart TV, dị ka Samsung Smart TV, LG SmartTV, Sony, na ndị ọzọ.
2; Nke mbụ, gbanye menu ntọala Smart TV gị.
3; Tọọ ekwe si Isi mmalite amaghi gaa na.
4; Chọta"Njikwa Ihe Njikwa ES"Na play Store wee budata ya na ngwaọrụ gị.
5; Mepee ngwa wee pịa Tinye.
6; Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa faịlụ ahụ ugboro abụọ ma tinye ya na ngwaọrụ gam akporo gị site na ịpị akwụkwọ edokọbara. -> Pịa na ibe edokọbara ka ịnweta na tinye a Ngwa Cinema APK si https://cinemahdv2.net/.
7; Ị nwere ike iwunye mmemme site na faịlụ ebudatara wee malite iji ya.
Usoro 2: Iji Puffin Browser
Ị nwere ike wụnye Cinema HD APK faịlụ na gị smart TV eji Ihe Nchọgharị Puffin. Ihe nchọgharị puffin bụ ihe nchọgharị ọhụrụ a na-ejikarị na Smart TV iji budata ngwa. Ka m jegharịa gị otu esi ebudata na wụnye Cinema HD APK na ihe nchọgharị puffin.
Mepee Smart TV play Store na tinye ihe nchọgharị Puffin.
Na Smart TV gị, mepee ya play Store ma wụnye Ihe Nchọgharị Puffin.
Open na Ihe nchọgharị weebụ Puffin on your smart TV (chọrọ njikọ na ịntanetị).
Download Cinema HD APK site na njikọ dị n'okpuru iji Ihe nchọgharị Puffin. A ga-echekwa faịlụ APK na nchekwa nbudata gị mgbe nbudata ya.
Kpatụ faịlụ APK ozugbo ibudatara ya na kọmputa gị. Mgbe ahụ, gaa na nchekwa nbudata wee pịa faịlụ APK ugboro abụọ. Nke Isi mmalite amaghi nhọrọ ga-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ tinye faịlụ APK na smart TV gị, ị ga-ebu ụzọ gbanye ya Isi mmalite amaghi nhọrọ.
Mgbe enyere ndị Isi mmalite amaghi nhọrọ, jiri remote's Tinye bọtịnụ imeghe faịlụ APK ebudatara.
The Cinema HD APK a ga-etinye na gị smart TV mgbe ịpịrị bọtịnụ wụnye na ozugbo.
The Cinema HD ngwa ugbu a arụnyere; ị nwere ike nweta ya site na ịga na ngwa n'ime gị smart TV.
Tupu nbudata na wụnye ihe Cinema HD APK, jide n'aka na smart TV gị nwere ọnụ ụlọ zuru oke.
Tọọ TV bụ ihe mgbakwunye TV smart nke na-edekọ akụkọ nlele gị niile. Ihe mgbakwunye Trakt TV ga-edobe ihe niile ị na-elele na smart TV gị. Ị nwere ike ileghachi anya azụ na ihe ngosi gara aga ị hụla na smart TV gị. Nke a bụ usoro maka itinye ihe mgbakwunye Trakt TV n'ime Cinema HD ngwa.
Mgbe ị wụnyechara Cinema HD ngwa, gaa na menu nri ma họrọ Settings.
Kpatụ Nnabata nhọrọ na Settings menu.
Na menu akaụntụ, họrọ Banye na Trakt TV dị ka nke atọ nhọrọ. Wụnye ihe mgbakwunye site na ịhọrọ nhọrọ.
Ugbu a ị ga-achọ ịbanye nke gị Tọọ TV nzere na igbe nbanye. N'ime aha njirimara na paswọọdụ, pịnye aha njirimara na paswọọdụ gị. Mgbe ahụ pịa "banye"Bọtịnụ.
Ihe mgbakwunye Trakt ugbu a na-enye gị ohere idobe ihe omume elekere ọ bụla.
Soro otu usoro ahụ dị na mbụ, mana oge a gakwuru gị A gam akporo TV Igbe's nche ntọala na gbanye Isi mmalite amaghi.
Ozugbo nke ahụ gasịrị, ịnwere ike iji njikọ ewepụtara iji nweta faịlụ APK nke ngwa ahụ.
Chere ruo mgbe nbudata agwụchara wee mepee faịlụ ahụ.
Chọọ ngwa na igbe Android TV gị mgbe echichi mechara.
Ị nwere ike ugbu a malite ma jiri mmemme site na ihuenyo a.
Tupu ịmalite echichi, jide n'aka na ekwentị gam akporo gị na afọ ejikọrọ ngwaọrụ na otu netwọk WiFi. Ị adịghị mkpa gbanye gị android ekwentị maka nke a.
Ị nwere ike ibudata Ihe nkiri sinima APK Faịlụ na ekwentị gam akporo gị si ebe a.
Download CINEMA HD v2 APK si na njikọ dị n'okpuru:
Iji malite, ị ga-ebudata ma wụnye mmemme nke ndị ọzọ mara dị ka 'Mpaghara mpaghara' site na Google Play Store.
Open na Ngwa nkedo mpaghara. Isi ihuenyo nke ngwa a ga-enwe akara nkedo edo edo. Họrọ otu site na ịpị ya, a ga-akpọrọ gị gaa na ndepụta ngwaọrụ enwere ike ibugharị.
A ga-enwe nhọrọ iji gbanwee nyocha na-arụ ọrụ. Jiri usoro a iji mee ka 'Nhọrọ nchọpụta' na Roku.
Iji malite, jikọọ ya Roku Stick na Smart TV gị ma hụ na ị nwere njikọ ịntanetị kwụsiri ike n'ụlọ gị.
Mepee Ụlọ Ahịa Roku na TV gị.
N'akụkụ aka nri nke ala, ị ga-ahụ nhọrọ ọchụchọ; nke a bụ ebe ị nwere ike ịchọ Onye nnata ihe nkedo mpaghara.
Ozugbo etinyere ihe niile, laghachi na isi peeji nke menu ngwaọrụ gị.
Wụnye ọhụrụ cinema HD ewepụtara na njikọ nke bu ụzọ wee malite ya.
Ugbu a, ị ga-ahọrọ ihe nkiri ma ọ bụ ihe ngosi TV ka ị lelee.
A ga-enye gị njikọ pụrụ iche iji nweta ihe nkiri ma ọ bụ mmemme ị họọrọ.
Ị ga-ebu ụzọ pịa ma jide njikọ ọ bụla pụtara, wee họrọ nhọrọ nkedo meghere.
Nke ahụ bụ ihe niile dị na ya! Ugbu a enwere ike ịhụ ihe nkiri/ihe onyonyo ọkacha mmasị gị na Roku. Agaghị egbochi gị ịkpọ oku ekwentị ma ọ bụ izipu ozi mgbe ị na-enuba na ama Android gị.
Iji tinye Cinema HD APK na Roku, na-eso ndị a ise mfe nzọụkwụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko egbula ịkpọtụrụ anyị site na kọntaktị page.
Android Fans ga-enwe obi ụtọ na-amụta na ọhụrụ Google TV 4K na Chromecasts na-akwado ngwa Android na egwuregwu. Nke a pụtara na ị nwere ike iwunye APK ndị ọzọ gam akporo Google TV 4K yana Chromecast yana. Ka anyị lee ka esi etinye Cinema HD APK na Google TV 4K eji Chromecasts ke ibuotikọ emi.
Iji wụnye Cinema HD Ngwa ngwa-enweghị mgbasa ozi on Google TV 4K, ị ga-emecha usoro omume. Nke a bụ ndepụta nkenke maka ịdị mma gị.
Kwado Nhọrọ Onye Mmepụta (akụkụ 1)
Soro usoro ndị a dị n'okpuru iji jikọọ ngwa Google TV gị na smart TV gị.
Pịa bọtịnụ profaịlụ dị n'akụkụ aka nri elu nke ihuenyo Google TV.
Ntọala, akara ngosi gia Pịa Họrọ mpịakọta Sistemu gbadaa wee họrọ Na gam akporo TV OS wuo ugboro asaa site na iji bọtịnụ okirikiri Google TV remote, biko họrọ Banyere.
Biko kpatụ Android TV OS wuo 7 oge na-eji bọtịnụ gburugburu etiti Google TV remote n'okpuru About.
Ị ga-ahụ ọkwa agụ "Ị bụ Onye Mmepụta" Ị ga-enwe ike ibudata ngwa ndị ọzọ na ya Google 4K.
wụnye Cinema HD APK maka Google TV 4K (Nkebi nke 2)
Biko gaa na nhọrọ ngwa site na menu kwụ ọtọ na ihuenyo ụlọ Google TV.
Mgbe ahụ, n'okpuru App Categories, họrọ Chọọ ngwa.
wụnye Onye na-aputa ihe na Google TV gị site na itinye ihe nbudata na Ogwe ọchụchọ.
Open na Ngwa nbudata ozugbo echichi kwụsịrị.
Biko mepee Nzuzo > Nche & Mmachibido gị Ntọala Profaịlụ.
Biko lelee Isi mmalite amaghi agbanyerela n'okpuru nhọrọ nke Isi mmalite Amaghi ama.
Mgbe nke ahụ gasịrị, malite ngwa nbudata site na ihuenyo ụlọ n'okpuru ngalaba Ngwa gị.
Nye ohere site na ịpị Hapụ.
Biko tinye URL ndị a n'ime ubi URL nke Downloader App iji budata Cinema HD APK kacha ọhụrụ maka Google TV.
Mgbe ịmechara nbudata APK, ntuziaka nwụnye dị mfe na ihuenyo ga-apụta. Iji tinye Cinema HD na Google TV, soro otu usoro ahụ.
Nke ahụ bụ naanị ihe dị na ya! Ị nwere ike iwunye ngwa Android ọ bụla nke atọ Google TV 4K na Chromecasts site n'ịgbaso ntuziaka ndị dị n'elu.
Otu esi emelite ngwa Cinema na Google TV site na iji Chromecast
Usoro nke imelite Cinema HD na Google TV na ụdị kachasị ọhụrụ bụ nke kwụ ọtọ. Anyị akọwapụtala gị ihe niile n'okpuru.
gaa Ngwa gị > Cinema HD.
Họrọ ma jide ndepụta ngwa.
Ihuenyo ga-apụta na-arịọ gị ka ịhọrọ View nkọwa.
Melite ma ọ bụ Uninstall bụ nhọrọ abụọ.
Meghee Google TV remote ngwa na gị android usoro wee gaa Settings, wee họrọ ngwa. Họrọ Cinema HD MOD ngwa iji wepụ ya na gị
Biko buru n'uche na ị gaghị enweta mmelite akpaka maka ngwa ahụ ebe ọ bụ na o sighị na Ụlọ Ahịa Google Play. Iji nweta ụdị kachasị ọhụrụ, naanị wepụ ma wụnye ngwa ahụ.
Iji wetara gị ahụmịhe nke ikiri ihe nkiri, na ihe ngosi TV na-akparaghị ókè, ndị mmepe ọdịnaya. Cinema HD ngwa ga-aga n'ihu na-emelite ma wepụta ụdị ọhụrụ yana njirimara ndị ọzọ, ụdị ahụhụ edoziri na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ imelite na ụdị ngwa kachasị ọhụrụ, ị nwere ike soro usoro ndị a dị mfe n'okpuru:
Mgbe ị nwetara ozi na-emelite onwe ya mgbe ọ bụla ụdị ọhụrụ dị, ị nwere ike pịa wụnye na update window na-amalite wụnye ọhụrụ version.
Ị nwekwara ike ịlele ụdị ngwa ọhụrụ emelitere site na Menu → Gwa → Mmelite ọhụrụ dị wee malite imelite ụdị ọhụrụ ka ị nwee ọ enjoyụ.
Mgbe emechara echichi nke Cinema ngwa, ị ga-ahụ ngwa ahụ dị mfe iji n'ihi na ọ dịghị achọ ihe ọmụma teknụzụ ọ bụla. Ị nwere ike imepe ngwa a ngwa ngwa site na ihuenyo bụ isi ka ịmalite ịnụ ụtọ ọdịnaya.
Mgbe imeghe Cinema Apk maka oge mbụ, ị ga-ahụ ozi bụ isi nke ngwa ahụ. Na ị ga-ahụ "Gaa n'ihu"iji gaa n'ihu na-eji ngwa a, ma ọ bụ ị nwere ike pịa"nso” ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwụsị.
Mgbe ị na-aga n'ihu na-eji Cinema Apk, a ga-egosi gị interface onye ọrụ, nke ga-egosipụta ihe ngosi TV site na ihe ọkpụkpọ vidiyo ndabara. Ka ịhọrọ ịkwanye ihe nkiri efu, gaa na Menu ma họrọ Movies site na menu ndọpụta.
Na katalọgụ ọdịnaya nke Cinema Apk na-enye, ị ga-ahụ nchịkọta ihe nkiri Hollywood na-ewu ewu na ihe ngosi TV, ị nwere ike họrọ ọdịnaya ọ bụla kachasị amasị gị site na ịhọrọ ya site na ibe ụlọ ma ọ bụ chọọ ya site na iji igbe ọchụchọ.
Mgbe ịhọrọchara ọdịnaya ọkacha mmasị gị, ị ga-achọ imetụ "Watch” bọtịnụ wee malite imikpu onwe gị na ihe nkiri na ihe nkiri mara mma. Ị nwekwara ike ịhọrọ n'ime asụsụ 20 dị iche iche nke Cinema APK na-akwado. N'ihi ya, ị nwere ike lelee ọdịnaya ama ama site na ebe ị na-amaghị asụsụ obodo.
Ọ bụrụ na afọ ojujughị gị na ntọala ndabara nke a Cinema Apk, ị nwere ike iwepụ ya ma tinyegharịa ngwa ahụ. Ị nwere ike iji Ezigbo Mmebi njikọ generator iji gbochie caching. Ezigbo Mmebi ga-enye gị ọtụtụ njikọ dị elu site na sava nke na-ebelata caching na ị nwere ike ịnụ ụtọ ihe nkiri dị elu na igosi njikọ. Ya mere, banye ngwa ngwa n'ime ezigbo mkpofu na ntọala akaụntụ gị wee nweta njikọ ndị a ozugbo.
Ajụjụ banyere Cinema HD V2
Enwere m ike ịnụ ụtọ ihe nkiri na ihe nkiri TV mgbe m na-anọghị n'ịntanetị na ngwa Cinema?
Ee. Ngwa Cinema a ga-enye gị ohere ibudata ihe nkiri ọ bụla, wee gosi ya na ngwaọrụ gị, ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ihe nkiri ebudatara na ihe nkiri TV ọbụlagodi na ịnweghị njikọ ịntanetị ma ọ bụ data mkpanaka.
Ọ dị m mkpa ịgbanye ekwentị gam akporo m tupu nbudata Cinema HD Ngwa?
Ee e, ị na-adịghị mkpa ka mgbọrọgwụ ngwaọrụ gị mbụ, na ị dị nnọọ mkpa ka enyere ihe amaghị isi iyi ibudata cinema ngwa.
Enwere m ike itinye ndepụta okwu maka ihe nkiri, ihe ngosi na Cinema HD Apk aka?
Ee. Cinema HD na-enye gị ihe nkiri n'efu na usoro TV nwere ndepụta okwu dị n'ọbá akwụkwọ nke ngwa ihe nkiri a. Agbanyeghị, ngwa ngwa Cinema a na-enye gị ohere iji aka tinye ndepụta okwu. Iji mee nke a, ị nwere ike pịa ntọala na mgbasa ozi mgbasa ozi wee họrọ faịlụ ndepụta okwu (.srt) site na nchekwa mpaghara wee nwee obi ụtọ na ọdịnaya ozugbo.
Achọrọ m ịdebanye aha akaụntụ wee kwụọ ụgwọ kwa ọnwa iji lelee ihe nkiri na ihe ngosi na Cinema Apk?
Mba. Ị nwere ike ịnweta ngwa a n'efu na-enweghị ịdebanye aha maka akaụntụ. Ọzọkwa, Cinema Apk iwu na weebụsaịtị anyị cinemahdv2.net A na-enye ya n'efu, yabụ ị nwere ike itinye onwe gị na ọdịnaya ọkacha mmasị nke ngwa a ga-enye n'enweghị nchegbu maka ihe ọ bụla.
Ọ dị mma ịwụnye Cinema HD ngwa na webụsaịtị gị?
Cinema HD Apk dị na weebụsaịtị anyị cinemahdv2.net enyochala ma nwalee site na ngwa mgbochi malware. Anyị anwalela ngwa ahụ ma anyị ahụghị ihe ọjọọ ọ bụla, yabụ ị nwere ike ijide n'aka 100% maka nchekwa nke ngwa a ma nwee ọ enjoyụ ọdịnaya ọ nwere inye.
Kedu ihe m ga-eme ma ọ bụrụ na m Cinema HD ngwa na-enwe nsogbu njikọ nkwanye?
Ọ bụrụ na ị zutere nsogbu mgbe ị na-achọ ịkpọ njikọ nkwanye, ọ na-egosi na njikọ ahụ adaala. Ị ga-echere ruo mgbe arụziri njikọ ahụ.
Ọ bụ iwu kwadoro iji Cinema HD ngwa?
Ọ bụghị iwu na-akwadoghị ka ibudata na wụnye ya Cinema HD ngwa dị na ekwentị gị, mana ịkwanye ihe nwebiisinka bụ mmebi iwu. Yabụ, etinyela ihe ọ bụla ọzọ karịa ọdịnaya enyere ikike.
Is Cinema HD dakọtara na ngwaọrụ m?
Ị nwere ike ịwụnye Cinema na Firestick/Fire TV, FireStick Lite, Android TV Igbe, ngwaọrụ mkpanaka gam akporo, na ndị ọzọ.
Is Cinema HD Ngwa ihe nkiri kacha mma dị?
Ee, Cinema HD Ngwa ugbu a bụ nhọrọ kachasị mma maka ikiri ihe nkiri na ihe ngosi telivishọn n'efu.
Kedu otu m ga-esi hazie ngwa maka TV m?
Nke a ekwesịghị ịbụ nsogbu na afọ Google Chrome, Amazon Firestick, na teknụzụ ndị yiri ya.
Ọ bụ Cinema HD APK dakọtara na Smart TVs?
Samsung Smart TVs, LG Smart TVs, Panasonic smart TVs, Sony televisions, Sony Bravia televisions, Mi TV sets, cloudwalker smart TVs, TCL smart TVs, Kodak Smart TV sets, na ọtụtụ ụdị ndị ọzọ dị.
Is Cinema HD dakọtara na smart TV na Firestick/Fire TV?
Ee! Cinema HD Enwere ike ibudata ma tinye APK na Firestick ma ọ bụ Fire TV. Ị nwekwara ike tinye ya Cinema HD na Android TV, Android Box, Nvidia Shield, PS 4, na Xbox One.
Ọ dị mkpa iji netwọk nzuzo mebere ya Cinema HD?
Otú ọ dị, anyị na-akwado iji ọrụ VPN tozuru oke mgbe ị na-ekiri Cinema HD.
Ọ ga-ekwe omume ịwụnye Cinema Hd na Windows PC?
Ee! Ị nwere ike iji usoro akọwara n'isiokwu a iji wụnye Cinema HD na Windows PC/Laptop.
Enwere nkwado Chromecast nwere Cinema HD?
Ee! Cinema HD v2 na-akwado Chromecast.
Cinema HD ngwa bụ otu n'ime ọtụtụ ngwa Android na-enye gị ihe ngosi na ihe nkiri kachasị amasị gị. Ngwa a pụtara ìhè na ọ na-enye ndị ọrụ gam akporo ngwa Cinema na ihe nkiri HD nwere ọtụtụ puku ihe nkiri na usoro TV. Ị nwere ike iji ngwa a meju agụụ ihe nkiri gị, yabụ budata ụdị kachasị ọhụrụ na gam akporo, Fire stick & PC na webụsaịtị anyị ka ịnụ ụtọ ugbu a.
© 2022 CinemaHDv2.Net. Ikike niile echekwabara.